Hawlaha hawada. Waa maxay, sidee loo cabiraa iyo muhiimada ay leedahay | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa waad maqashay ifafaalaha hawraar marka laga hadlayo dhirta. Xaqiiqdii, waa dhacdo dhacda marka dhirtu biyo ka waydo unugyadooda sababo la xiriira laba ifafaale oo isla falgala: uumi bixin dhinac ah iyo dhidid dhinaca kale ah. Evapotranspiration waxaa lagu qeexi karaa tixgelinta wadajirka ah ee labadan geeddi isku mar.
Qoraalkan waxaan ku tusi doonnaa sida farsamadan u shaqeyso iyo muhiimadda ay u leedahay wareegga biyaha.
1 Waa maxay uumi-gudbinta
2 Cabbiraadyo iyo adeeg
3 Noocyada gudbinta hawada
4 Muhiimadda beeraha
Waa maxay uumi-gudbinta
Waxaan ku bilaabaynaa inaan si fiican u qeexno hawlgallada ay isla mar wada fulinayaan kuwa aan soo sheegnay. Nidaamka ugu horeeya waa uumi bax. Waa dhacdo jireed in waxay calaamad u tahay isbeddelka xaaladda biyaha ee dareeraha iyo uumiga. Tan waxaa kale oo ka mid ah geeddi-socodka sublimation-ka ee dhaca marka biyuhu ku jiraan qaab baraf ama baraf isla markaana toos ugu taga uumiga iyadoon la marin xaalad dareere ah.
Uumi baxa wuxuu ka yimaadaa dusha sare ee carrada iyo dhirta isla marka roobku da'o. Heerkulka awgood, tallaabada shucaaca qorraxda ama dabaysha awgeed, dhibcaha biyaha ee da'ay waxay ku dambeeyaan uumi bax. Meel kale oo uumi uumi ka dhacdo waa dusha biyaha sida webiyada, harooyinka, iyo baraagaha. Waxay sidoo kale ka dhacdaa dhulka iyada oo ay jiraan biyo dhex galay. Se badanaa wuxuu uumi baxaa aaga ugu qoto dheer ilaa maqaarka. Kani waa biyo dhowaan la soo dhex geliyay ama laga sii daayay aagagga.
Dhinaca kale, waxaan leenahay geedi socodka dhididka. Waa dhacdo nafley ah oo ka dhacda dhirta. Waa habka ay biyaha ku waayaan kuna shubaan jawiga. Dhirtaasi waxay biyaha ka soo qaadaan xididdada dhulka. Qayb ka mid ah biyahan waxaa loo isticmaalaa koritaankooda iyo shaqooyinkooda muhiimka ah iyo qaybta kale ee ay ugu gudbaan hawada.
Cabbiraadyo iyo adeeg
Maaddaama labadan ifafaale ay adag tahay in si gooni gooni ah loo cabbiro, waxay u wada dhacaan sidii soo-saarid hawleed. Xaaladaha badankood tan waxaa lagu baranayaa, waxaad u baahan tahay inaad ogaato wadarta guud ee biyaha ku lumaya jawiga iyo hanaanka ay ku lumayaan waxba ma ahan. Xogtaan waxaa loo baahan yahay si loo sameeyo dheelitirka biyaha ee xaddiga biyaha dhaca marka loo eego wixii lumay. Natiijadu waxay noqoneysaa isku dheelitirnaan saafi ah oo saafiya, haddii biyuhu urursadaan ama aan haysanno kheyraad dheeri ah, ama diidmo, haddii aan weyno biyo urursan ama aan lumino kheyraad.
Kuwa daraasad ku sameeya isbeddelka biyaha, dheelitirka biyahani aad ayey muhiim ugu yihiin. Daraasadahaani waxay ku wajahan yihiin tirakoobka ilaha biyaha ee aag. Taasi waa in la yiraahdo, dhammaan biyaha roobka ka soo go'ay biyaha ku lumay uumi baxsiga, waxay noqon doonaan mugga biyaha la heli karo inaan qiyaas ahaan yeelan doonno. Dabcan, waa inaan sidoo kale tixgalino qadarka biyaha ee soo galaya iyadoo kuxiran nooca carrada ama jiritaanka aquifers.
Evapotranspiration waa isbeddel muhiim ah oo ku saabsan cilmiga cilmiga cilmiga beeraha. Waxaa loo arkaa cunsur muhiim ah iyadoo la tixgelinayo baahida biyaha ee dalagyada ay leeyihiin si ay si sax ah ugu horumaraan. Waxaa jira qaaciddo xisaabeedyo badan oo loo isticmaalo in lagu ogaado xogta lagama-maarmaanka u-bixidda ugaarsiga iyo isku-dheelitirka biyaha.
Halbeega lagu cabiro waa mm. Si aan fikrad kaa siino, maalinta kuleylka kulul waxay awood u leedahay ka-gudbinta hawada inta u dhexeysa 3 iyo 4 mm. Mararka qaarkood, haddii aagagga la cabiray ay ku badan yihiin dhirta, qofku wuxuu kaloo ka hadli karaa mitir cubic halkii hektar oo dhul ah.
Noocyada gudbinta hawada
Si awood loogu yeesho in sifiican xogta loogu kala saaro dheelitirka biyaha, xogta udejintu waxay uqeybsantahay dhowr qaab. Midka koowaad waa suuragalnimada ka gudbinta hawada (ETP). Xogtani waa tan innooga tarjumeysa waxa laga soo saari doono qoyaanka ciidda iyo doogga doogga oo ku jiray xaalado wanaagsan. Taasi waa, xaddiga biyaha uumi bixi lahaa oo u gudbi lahaa haddii xaaladaha deegaanku ay ku fiicnaan lahaayeen.
Dhanka kale waxaan leenahay dhabarka uumi baxa (ETR). Xaaladdan oo kale, waxaan cabbiraynaa xaddiga dhabta ah ee biyaha ka soo baxa guryaha iyada oo ku saleysan xaaladaha jira xaalad kasta.
Qeexitaannadan waxaa ku cad in ETR uu ka yar yahay ama u dhigmo ETP. Tani waxay dhici doontaa 100% waqtiga. Tusaale ahaan, cidlada, ETP qiyaastii waa 6mm / maalin. Si kastaba ha noqotee, ETR waa eber, maxaa yeelay ma jirto biyo lagu baxsado. Mararka kale, labada noocba waxay noqonayaan kuwo isku mid ah, illaa inta xaaladaha ugufiican la bixinayo oo uu jiro daboolid dhir wanaagsan.
Waa in aan la xusin in uumi-socodku yahay shay aan innaba ina danayn. Micnaheedu waa luminta ilaha biyaha ee aan la isticmaali karin. Waa inaan sidoo kale maskaxda ku haynaa inay tahay hal cunsur oo ka mid ah wareegga biyaha ee biyaha iyo in, goor dhow ama goor dambe, wax kasta oo uumi baxay ay mar uun soo da'ayn doonaan.
Dhammaan qeexitaannada kor ku xusan waxay muhiim u yihiin xisaabinta injineernimada dalagga. Markii aan u isticmaalno qiyamka ETP iyo ETR ee hydrology, sidaas waxaa lagu xisaabtamayaa oo keliya inta ka hartay saxanka weelka. Cunsurradan waa kuwa tilmaamaya xaddiga biyaha ka lumay wixii soo dadajiyey. Si loo tixgeliyo mugga biyaha dusha sare ee la heli karo, sida keydka, dhexgalka ayaa sidoo kale ah cunsur yareysa xaddiga biyaha la heli karo.
Muhiimadda uumi-gudbinta bini'aadanimo ayaa sii kordheysa markii aan galno beeraha. Xaaladahan, farqiga u dhexeeya ETP iyo ETR wuxuu noqon karaa khasaare. Beeraha kala duwanaanshahan waxaa la doonayaa inuu noqdo eber, maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa in dhirtu had iyo jeer hesho biyo ku filan oo ay ku dhididdo markay u baahdaan. Sidaas ayaan ku keydinaa biyaha waraabka, sidaas darteed, waxaan hoos u dhignay qiimaha wax soo saarka.
Baahida biyaha waraabka waxaa lagu magacaabaa faraqan udhaxeeya uumi baxa.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan ay si buuxda u cadahay muhiimada iyo waxtarka uumiga u gudbinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Hawlaha hawada